WAR DEG DEG AL Shabaab oo gubay tuulo ku dhaw Magaalada Jowhar | Baydhabo Online
WAR DEG DEG AL Shabaab oo gubay tuulo ku dhaw Magaalada Jowhar
Ururka Al Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in xalay ay gubeen gabi ahaanba tuulada gaaleefto oo 15-KM u jirta Magaalada Jowhar ee xarunta Maamulka Hirshabelle.
Dadka deegaanka ayaa sheegay Shabaab muddooyinkaan dambe inay hanjabaad ku hayeen dadka, maadaama dadka tuulada ay diideen bixinta Zakawaadka Shabaab ay sida qasabka ah uga aruuriyeen dadka ku nool Gobolada dalka Somaliya.
Ciidamo badan oo Shabaab ka tirsan ayaa xalay maqribkii gudaha u soo galay tuulada gaaleefto, waxayna dab qabadsiiyeen dhamaan guryihii ku yaalay tuulada, inkastoo ka hor inta aysan gubin ay aruursadeen Shabaab dhamaan wixii yaalay goobaha ganacsiga ee tuulada.
Dadka deegaanka intii dhalinyaro aheyd ayaa la sheegay inay isaga carareen deegaankaasi, markii ay maqleen in Shabaab ay ku soo wajahan yihiin, waxaana Shabaabka ay ugu yimaadeen Magaalada Odayaal, Haween iyo caruur.
Qof ka mid ah dadka deegaanka tuulada Gaaleefto ayaa u sheegay Warbaahinta dabka la qabadsiiyay tuulada inuu damay xalay 11:00 habeenimo markii ay aheyd, xilligaasi oo Shabaab ay ka baxeen Magaalada markii ay xaqiiqsadeen in gabi ahaanba tuulada ay gubatay.
Hooyooyinkii iyo caruurtii ayaa xalay ku hooyday geedaha hoostooda sida qof ka mid ah dadka deegaanka uu soo wariyay, iyadoo arintaasi walaac ay ku abuurtay dadkii deganaa tuulada gaaleefto oo gabi ahaanba tuuladoodii hadda noqotay meel maran.
Ma jirin ciidan dowladeed ama kuwa Amisom oo ku baxay deegaankan ku dhaw Magaalada Jowhar, maadaama ciidamada Amisom iyo kuwa xooga dalka ay buuxaan Magaalada Jowhar, waxaase xusid mudan in 15-KM kaliya ay u jirto Gaaleefto Magaalada Jowhar.
Xoogaga Shabaab ayaa dadka bixin waayo Zakawaadka waxa ay ugu hanjabaan inay dilayaan ama ay ka dhacayaan wixii xoolo ah uu haysto, taasi oo qofka ku qasbeysa inuu bixiyo wixii uu haysto ama uu ka guuro deegaanka uu degan yahay.